Maxaa Looga Aamusay Xasuuqa Caruurta Ka Dhan Ah Ee Ka Socda Yeman? – War La Helaa Talo La Helaa
Maxaa Looga Aamusay Xasuuqa Caruurta Ka Dhan Ah Ee Ka Socda Yeman?
By Jiinoow	 On Sep 10, 2018
Muddo haatan bil laga jooga ayaa duqeyn dhanka cirka ah oo isbahaysiga uu Sucuudiga hooggamiyo la beegsaday bas siday carruur ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 29 cannug, waxaana arrintaasi ka dhashay cambaareyn caalami ah.
Isbahaysigani oo dowladda Yaman ku taageeraya dagaalka ay kula jirta fallaagada Xuutiyiinta ayaa qirtay in uu “khalad” ka dhacay waxa uuna ballan qadaay in la “ciqaabayo” dadkii lahaa mas’uuliyadda weerarkaasi.
Quwadaha reer galbeedka ayaa dalbaday in isbahaysigani uu qaado tallaabooyin lagu xaqiijinayo badqabka dadka rayidka ah.
Balse qoyasaska carruurtooda lagu laayay weerarkaasi ayaa wali dareemaya xanuunka uu weerarkaasi ku reebay.
Waxay ay ahayd xilli aroor ah oo aysan wali soo bixin cadceedda, 9-ka bisha Agoosto, markii Dr Cali Al-Taa’ifi uu ka soo baxay qolka qalliinka ee isbitalka Al-Talh oo ku yaal magaalada Sacda ee fallaagadu ay ka taliso.
Dhakhtarkan oo ku takhasusay qalliinka madaxa ayaa isu diyaarinayay in uu gurigiisa aado maadaama uu habeenki oo dhan uu shaqeynayay.
Suuq ku yaal magalaada Dahyan 22 20km woqooyiga ka xiga ayaa ganacsatadu waxa ay u soo diyaar garoobeen shaqadooda caadiga ahi.
Zeyd Xuseen Tayib waxa uu la quraacanayay xubnaha kale ee qoyskiisa. Saddex ka mid ah shanta wiil ee uu dhalay ayay ahayd in ay u baxaan safar gaaban oo qeyb ah qalinjebinta dugsi quraanka ay dhigtaan balse Tayib ayaa ka caga jiidayay in carruurtiisu ay aadaan safarkaasi.
“Waxaan sugeynay in xilli kastaa ay dhici karto duqeyn, ha ahaato suuqa, masjidka ama xitaa meelaha kale ee ay dadku ku kulmaan sida aaska oo kale,” ayuu yir Tayib.
Gobolka Sacda oo Xuutiyiintu ay ku xooggan yihiin ayaa tan iyo sanadkii 2015 ahaa bartilmaameedka duqeymaha isbahaysiga uu Sucuudiga hoggaamiyo.
Waxaana duqeymahani ay sababeen inta badan dhimashada 6660 qof oo rayid ah iyo dhaawaca 10,563 oo qof oo rayid ah sida ay sheegtay Qaramada Midoobey.
Inkastoo halistaasi ay jirta, haddana Tayib waxa uu wiilashiisa kala ah Yuusuf oo 14 jir ah, Axmad oo 11 jir ah iyo Cali oo sagaal sano jir ah u ogolaaday in ay baxaan oo ay safarka u racaan ardayda kale.
Muuqaal lagu duubay taleefoonnada gacanta oo ay baahiyeen Xuutiyiintu ayaa muujinayay arday faraxsan oo ka saaran baska nasiib darrada ay ku habsatay.
Muuqaalkaasi ayaa sidoo kale waxaa laga dhex arkayay carruur faraxsan oo akhrinaya aayado Qur’aan ah oo uu macallinkooda la jooga.
‘Xanuun aanan laga sheekeyn karin’
Qiyaastii 8:20 barqanimo, Tayib waxa uu meel u dhow suuqa ku sugayay saaxibkii, waxaana meesha soo istaagay baskii siday carrurtiisa iyo kuwa kale ee safarka u socday.
Dad goobjoogeyaal ah ayaa sheegaya in darawalka baska sida carruurta uu damcay in uu carruurtani cabbitaan u iibiyo.
Isla markiiba waxaa hawada qabsaday guuxa diyaarado miig ah ka hor inta aysan gantaalka la helin baska ay saarnaayeen carruurta.
Tayib oo aad u argagaxsan ayaa soo aaday meesha lagu weeraray carruurta. “Waxaan dareemay xanuun, xanuun aan laga sheekeyn karin,” ayuu yiri.
Waxa uu markiiba billaabay in uu baadi goobo wiilashiisa.
Waxaa uu helay oo uu kor u qaaday meydka mid ka mid ah wiilashii saarnaa baskla oo dhabarka uu u suran tahay boors yar oo buluug ah. Markii uu wajigiisa eegay wuxuu gartay in uu yahay wiilkiisa Axmad.
Isla markiiba haddana waxa uu arkay meydadka wiilkiisa Yuusuf, waxa uuna markiiba ag dhigay meydka Axmad oo uu markii hore dhigay meel waddada agteeda ah. Kaddib waxaa soo wacay xaaskiisa oo dooneysa in ay ogaato xaaladda carruurtooda.
Markii uu u sheegay sida ay wax u dheceen, walina nolal iyo geer midna uusan ku hayn Cali ayay ka codsatay in uusan guriga ku soo laaban inta uu ka soo helaya wiilkooda maqan.
Dhibbaneyaal da’ yar
Wax yar kaddib waxaa dhaawacyadii la geeyay isbitaalka waxaana Dr Taa’ifi uu ku khasbanaaday in uu u gurmado carruurta dhaawaca ahi. Waxa uu aad uga xumaaday dhibka dhacay iyo carruurta da’da yar ee ay masiibadu ku habsatay.
Tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan, Dr Taa’ifi waxa uu ka shaqeynayay mid ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn ee magaalada Sanca oo ay fallaagadu maamusho waxa uuna qalliin ku sameeyay dad aad u tiro badan oo dhaawacyo ka soo gaareen duqeymaha isbahaysiga Sucuudiga uu hoggaamiyo.
Balse waxa uu sheegayaa in waligii uusan arkin weerar ka naxdin badan kii lagu laayay carruurta.
Wasaaradda caafimaadka oo ay Xuutiyiintu maamulaan ayaa sheegtay in 40 carruur ah iyo 11 qof oo kale lagu dilay weerarkaasi oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen 79 qof oo rayid ah. 56 ka mid ah dadka daawaca ah ayaa ahaa carruur.
Hay’adda caalamiga ah ee laanqeyrta cas ayaa xaqiijisay in isbitaalka Al-Talh la soo gaarsiiyay meydadka 29 carruur ah.
Dhanka kale, hay’adda xaquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa shaacisay magacyada iyo da’da 34 qof oo ku dhintay duqeyntaasi, waxaana magacyadaasi ku jiray 25 carruur ah iyo saddex macalin oo saarnaa baska. Sidoo kale magacyada la shaaciyay waxaa ka mid ahaa cannug, nin macalin ahaa iyo laba nin oo kale oo la sheegay in ay taagnaayeen gudaha suuqa.
‘Bartilmaameed sharci ah’
Inakstoo ay caddeyd in carruur lala eegtay, haddana isbahaysigani uu Sucuudiga hoggaamiyo ayaa markii hore ku adkeystay in uu ahaa “tallaabo milatari oo sharci ah isla amrkaana waafaqsan shuruucda calamiga ah ee bani’aadannimada”.
Afhayeenka isbahaysigani korneel Turki Al-Malki ayaa sheegay in duqeyntaasi lala eegtay fallaagada Xuutiyiinta oo mas’uul ka ahaa gantaal kuwa riddada dheer ah oo laga soo riday gobolka Amran, kaasi oo hannaanka difaaca gantaallada ee Sucuudiga oo fashiliyay.
Firirka gantaalkaasi ayaa waxa uu magaalada Jazan ku dilay hal qof.
Laba maalmood kaddib ayaa safiirka Sucuudiga u fadhiya Qaramada Midoobey waxa uu sheegay in isbahaysigoodu uu dhacdadaasi u saaray koox gooni ah oo ku soo sameysa, si jawaab looga bixiyo eedeymaha sheegaya in baskaasi dad rayid ah lagu laayay.
Kowdii bishan Sebteembar ayaa isbahaysigani waxa uu sheegay in kooxdii baaritaannada loo xilsaaray ay xaqiijiyeen uu jiray khalad dhanka hawlgalka ahi, waxaana ay raali gelin ka bixiyeen khaladkaasi oo ay sheegeen in lala xisaabtami doono dadkii ka dambeeyay.
Waxa uu sidoo kale isbahaysigani ballan qaaday in uu dowladda Yaman uu kala shaqeynayo sidii magdhow loo siin lahaa qoyasaska dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay duqeyntaasi.
Lataliyaha dhanka sharciga ee kooxda gaarka ah ee loo xilsaaray baaritaannada Janaraal Maansuur Axmad Al-Mansuur ayaa sheegay in taliyeyaasha ciidamadu ay heleen xog ah in ninka tababarrada u xilsaaran Xuutiyiinta Maxamed Cabdulxaafid Siteen iyo saddex nin oo kale ay saaran yihiin baskaasi.
Balse waxa uu sheegay in duqeyntaasi ay ahayd in la geysto marka uu baskaasi u baxa meel bannaan ah si loo yareeyo khasaaraha soo gaaraya shacabka.
Maxamad Xajar oo ah mas’uul ka tirtsan wasaaradda caafimaadka ayaa ku gacan seyray eedeymaha ah in carruurtaasi loo adeegsanayay in looga gaashaanto duqeymaha isbahaysiga oo rag Xuutiyiinta ka tirsan ay ku dhex dhuumanayeen.
Wasaaraddu oo ay Xuutiyiintu maamulaan aya sheegtay in Maxamed Siteen uu ahaa macallin 28 jir ah oo ka tirsanaa dugsi Quraanka carruurtani dhiganayeen. Arrintaasi waxaa sidoo kale BBC-da u xaqiijiyay waalidiinta carruurta dhiganayay dugsigaasi iyo carruur ay wareysatay hay’adda Human Rights Watch.
Dr Taa’ifi iyo Dr Cabbas Al-Mutawakil oo ah madaxa qeybta xaaladda deg degga ee isbitaalka Al-Jamhuuri ee magaalada Sacda ayaa waxa ay sheegayaan in dadkii ay daweeyeen uusan ku jirin xitaa hal qof oo ka tirsan Xuutiyiinta.
Warbixinta kooxda gaarka ah ee isbahaysigu u saaray baaritaannada weerarkaasi ayaa sheegay in isbahaysigu uu diyaar u yahay ilaalinta shuruucda caalamiga ah ee dhanka dagaalka balse khubaro ka tirsan hay’adda xaquuqul insaanka ee Qaramada Midoobey ayaa sheegay in ay rumeysan yihiin in shakhsiyaad ka tirsan isbahaysigani ay geysteen weerarro lid ku ah shuruucda caalamiga ah isla markaana u digmo dambiyo dagaal.
Waxa ayna tusaale u soo qaateen duqeymo loo geystay deegaanno ay dad rayid ah deggan yihiin, goobo uu aas ka dhacayay, xarumo caafimaad iyo xitaa doomo ay la socdaan dad rayid ah.
Waxa ay khubaradani sidoo kale ku gacan seyreen eedeymaha ka dhanka ah Xuutiyiinta oo sheegay in ay geysteen dambiyo dagaal.
Iibka hubka reer galbeedka
Hay’adda Human Rights Watch iyo shabakadda Bellingcat ayaa labaduba sheegay in duqeyntaasi loo adeegsaday gantaal nooca GBU-12 Paveway oo ay sameysay shirkadda Lockheed Martin ee hubka u shameysa wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka.
Balse dowladda Mareykanka iyo shirkadda Lockheed Martin ayaa xaqiijiyay in gantaalkaasi loo adeegsaday duqeyntaasi. Waxaase dhanka kale soo baxaya su’aalo la iska weydiinayo doorka quwadaha reer galbeedku ku leeyihiin colaadda dalka Yaman.
Lahaanshaha sawirkaZAID TAYYIB
Waddamada Mareykanka, UK iyo Faransiiska ayaa isbahaysigan uu Sucuudiga hoggaamiyo ka taageeraya dhanka mukhaabaraadka isla markaana hubka ka iibinaya, iyada oo ay jiraan eedeymo ah in isbahaysigani uu ku lug leeyahay tacaddiyo ka dhan ah xaquuqul insaanka.
Inkastoo golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey uu walaac ka muujiyay xaaladda dalkaasi Yaman wixii ka dambeeyay duqeynta lagu laayay carruurta, haddana Tayib waxa uu la yaaban yahay sababta caalamka uu uga aamusay masiibada ku habsatay carruurtiisa iyo kuwa kale ee la socday baska la duqeeyay iyo waliba colaadda dalkiisa.
Shan saacadood kaddib amrkii ay duqeyntani dhacday ayaa Tayib waxaa laga soo wacay isbitaalka waxxaana lagu wargeliyay in la helay meydka wiilkiisa Cali oo uu raadinayay.
Deriskiisa ayaa baabuur ka qaatay oo waxa uu xaafadda keenay meydka wiilkiisa oo isaga iyo xaaskiisuba ay aad u jeclaayeen.
Waxa uu sheegay xitaa haddii geeridiisa ay 100 sano ka soo wareegta in xaaskiisu aysan illaawi doonin Cali.
Xigasho:- BBC Soomaali.
Xildhibaan C/laahi “Dowlad goboleedyada ma doonayaan jiritaanka qaranka”
Madaxweyne Xaaf oo baaq u diray mucaaradka maamulkiisa!!